Cabdulaahi Aniga Madaxweyne Ii Ma Aha
Cabdulaahi Yuusuf wuxuu jid kasta oo qaldan uu u maray sidii uu ku noqon lahaa madaxweyne Soomaaliyeed. Wuxuu sirta Soomaaliyeed siin jirey cadowga deriska, wuxuuna jabhad qabiil ku soo hogaamiyey cadowga deriska. Afar iyo toban shir oo caalamku u qabtay Soomaalida ayuu diidey, isaga oo doonayey dantiisu mida ay ku jirto in loo raaco. Wuxuu jabhad hubeysan kala horyimid dowlad Soomaaliyeed, waxaana isaga ku weyn in tiisa aan lagu jabhadeyn. Wuxuu markasta ahaa ninka ka soo horjeedey in Xamar uu maamul ka dhasho, haddana doonaya inuu isagu maamul hagaagsan u sameeyo. Wuxuu ahaa ninkii dabagalay nidaam dhaqameedka qowleysatada ka jirta waqooyi ee ku dhawaaqay maamul goonida uga taagan Soomaalida, kuna tiirsan cadowga deriska. Wuxuu gobolka Bari ka raacdeeyey dad Soomaaliyeed isaga oo qiil uga dhigtay ineysan degaanka u dhalan, waxaana ninkaas ku weyn in dadkiisu degaanada kale ee Soomaalida ay degaan. Wuxuu gobolka Bari ku laayey muwaadiniin Soomaaliyeed oo degaanka u dhasahay markii ay ka soo horjeesteen dhaqankoodii, diintoodii, dadkoodii,iyo dalkoodii cadowga loo gacan geliyey. Wuxuu degenaansho la’aan ku sameeyey degaanada waqooyi oo nabad gelyada ku wada degan isagoo magacyo qabiil adeegsanaya, haddana doonaya dabkuu shiday inuu dowladnimo waqooyi ugu taliyo. Nin mabda’iisu yahay dhiig daadin, ka amar qaadashada cadowga dalka iyo u rukuucida iskaashiga danaha shisheeye ma aha nin ku haboon hogaaminta dadka u dhashay dalka Soomaaliyeed.
Dadkii ka qaxay siyaasad xumada lagu maamulayey dalka qaar ka mida oo ay ka mid yihiin aqoon yahan cid walba u dhashay kuna daaley dibed joognimada ama sinji ahaan ahaa dadkii laga tirada badnaa ama ahaa dadkii duqnimada uga baqayey in siyaasada ay ka galaan howlgab iyo dadka aaminsan iney degaankooda ku hogaamiyaan ka qeybgelida iskaashi ku dhisan humaag qaldan oo ay ku damacsan yihiin iney ku dhacaan hantidii loogu tala galay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ayaa u arkay Cabdulaahi fursad ay ku meel marin karaan ujeedooyinka ay ku haminayaan iney gaaraan wakhti dhow.
Waxey dad badan u doorteen inuu Cabdulaahi dagaal la galo dadka degen xamar si uu u sii jiro miisaanka dadka laga tirada badan yahay ama wakiilnimada aan dhabta ahayn ee maqaar saarnimada loo siiyey dad aan runti ka wakiil noqon karin degaanada ay ka soo jeedaan. Waa arrin iska cad inaysan micno la’aan ahayn doonista Cabdulaahi uu ku doonayo ciidamo shisheeye oo Xamar u qabta. Waxaan shaki lahayn inuu cadowga deriska weydiisanayo iney ciidan sideetan kuna ay dalka si qarsoodiya ku soo geliso iyaga oo isku muujinaya ciidamo Soomaaliyeed ee ka yimid dhanka Bari. Waa wax iska cad in Ethiopia ay daneyneyso in Cabdulaahi uu u adeego danaheeda oo ku dhisan jiritaanka degaano is khilaafsan oo aan lahayn dowlad mideysan. Sababta Ethiopia ay u daneyneysay Cabdullaahi waa inuu yahay nin aan Soomaalida mideyn karin, inta uu madax yahayna sii kala fogeynaya inta isheysata. Cid walba way ka dhaadhacsan tahay in Cabdulaahi uusan awood ku maquunin karin dadka Xamar iyo Hargeysa dega. Dhinaca kale, wax kasta oo dhaca dadka degaankaas ma doonayaan maamulka Cabdulaahi si kasta oo uu isugu qariyo ama derbi uu isaga dhigo dad hanti doona oo ka soo jeeda degaanadaas.
Waxey dad badan isweydiinayaan waxa ay noqon doonto 5ta sanno ee soo socota. Waxaan qarsoodi noqon doonin in hubka dib la isugu guran doono. Waxaan meesha ka maqnaan doonin in Cabdulaahi uu magacaaban doono caasimad ku meel gaara, Baydhabo ama Boosaaso midood. Soomaaliya weli waxey ku jireysa go’doonkii ay dunida inteeda kale ay uga jirtey mar haddii uusan dalka hogaamineyn madaxweyne dadka intiisa badan aysan ku kalsooneyn. Kaalmada lacageed ee dalka imaaneysa waxey noqoneysaa mid aad u yar, maxaa yeelay dalalka dibeda waxaa u muuqday in Cabdulaahi codadkii dorashadiisu uu ku gatay lacag uu ka soo qaatay hantida dadweynaha oo uu u adeegsaday laaluush ahaan. Waa ay adag tahay gudaha iyo dibedaba si lagu aamino nin kelitalisa oo daadiyey shacabka dhiigiisa wakhti dheer, mabda’na ay u tahay inuu dalka ku xukumo musuqmaasuq iyo qabiil.
QORAALKII HORE EE DR. SACIID.....